Iindaba-Uhlalutyo lwenqanaba lophuhliso lwemarike kwishishini lokuvelisa imithwalo ngo-2020
Uhlalutyo lwenqanaba lophuhliso lwentengiso kwishishini lokuvelisa impahla ngo-2020
Iqhutywa luphuhliso loqoqosho lwehlabathi kunye neemfuno zentengiso, ishishini lemithwalo yelizwe lam likhule ngokukhawuleza kule minyaka ilishumi idlulileyo, kwaye ukwanda kwebango lemarike kuzise iinkampani ezininzi zemithwalo kwindlela yophuhliso olukhawulezileyo. Ngokombono wemodeli yeshishini, imodeli yoshishino lwasekhaya yemithwalo ikakhulu yi-ODM / i-OEM, kwaye ikhonkco lezamashishini ligxile kwizinto ezikumgangatho ophezulu nakwisiseko esiphakathi. Ukusuka kwimbono yesikali sokuthengisa, ingeniso yentengiso yeenkampani zemithwalo ezichongiweyo kwi-2019 yayiyi-141.905 yezigidigidi ze-yuan, ukwehla konyaka-nge-1.66%. Ukusuka kumbono wobungakanani bemakethi yempahla, ilizwe lemarike yemithwalo yamazwe e-2019 imalunga ne-253 yezigidigidi ze-yuan, ukwanda kwe-22.64% ngonyaka-kwaye unyaka wokukhula uphambi kwehlabathi. Ukusuka kwimbono yophuhliso lwengingqi lweshishini, ishishini lemithwalo yase China liphuhlise kakhulu kumaphondo aselunxwemeni eGuangdong, eFujian, eZhejiang, eShandong, eShanghai, eJiangsu, nakwilizwe laseHebei naseHunan. Umzi mveliso wempahla ngoku wenze i-Huadu, i-Guangdong, iqoqo lezemizi-mveliso e Pinghu, Zhejiang nase Baigou, Hebei.
I-China ngumenzi ophambili wemithwalo, ikakhulu i-ODM / i-OEM
Imithwalo sisixhobo esisetyenziswa ngokuqhelekileyo sokugcina imithwalo kuhambo lwethu lwemihla ngemihla. Iqhutywa luphuhliso lwezoqoqosho kunye neemfuno zentengiso, ishishini lemithwalo yelizwe lam likhule ngokukhawuleza kule minyaka ilishumi idlulileyo. Imfuno ekhulayo yentengiso izise uninzi lweenkampani zemithwalo kwingoma yophuhliso olukhawulezayo. Umzi mveliso wase China wemithwalo ulawule umhlaba, hayi kuphela iziko lemveliso lehlabathi, kodwa kwanentengiso yabathengi inkulu ehlabathini. Njengomvelisi ohamba phambili weempahla kunye neebhegi, iChina inamawakawaka abavelisi bemithwalo kwaye ivelisa phantse isinye kwisithathu semithwalo kunye neebhegi zehlabathi, kwaye isabelo sayo sentengiso asinakujongwa.
Ngokombono wemodeli yeshishini, imakethi yemithwalo yasekhaya inokhuphiswano olukhulu, imodeli yeshishini ikakhulu yi-ODM / i-OEM, kwaye ikhonkco lezamashishini ligxile kwizinto eziphezulu kunye nakwindawo yokuqala. Abadlali abaphambili beemarike zelizwe lam lokuvelisa imithwalo yimveliso yokuqhubekeka, abavelisi abaqeqeshiweyo kunye nabaqhubi beempawu. Okwangoku, uninzi lwamashishini emithwalo kunye neebhegi elizweni lam agxile kubenzi bokulungisa. Amashishini anjalo ngokubanzi mancinci kwisikali kwaye makhulu ngenani, ngexabiso elongeziweyo leemveliso kunye nokhuphiswano olunamandla kakhulu lwentengiso. Abavelisi bobuchwephesha bukhulu kwisikali, bane-R & D ethile kunye nokukwazi ukuyila, kwaye bagcina iimveliso zabo zohlobo. Abaqhubi beempawu zempahla yemithwalo ikakhulu basuka phesheya, bayaziqonda i-R & D, uyilo kunye namakhonkco entengiso kunye nemida ephezulu yemveliso.
Uphuhliso olukhawulezileyo lwentengiso, inqanaba lokukhula elikhokelela kwihlabathi
Ukusuka kwimbono yengeniso yentengiso yeshishini, umthwalo yenye yeecandelwana zeshishini eliphambili lesikhumba. Ngokwedatha ekhutshwe nguMbutho weSikhumba waseTshayina, ukuphela kuka-2018, bekukho iinkampani zemithwalo ezili-1,598 elizweni lam, ngengeniso eyongezelekileyo yokuthengisa ye-yuan ye-150.694 yezigidigidi, ukonyuka konyaka ngo-2.98%. Kwi-2019, ingeniso yentengiso yeenkampani zemithwalo phantsi kwemigaqo yayiyi-141.905 yezigidigidi ze-yuan, ukwehla konyaka-nge-1,66%.
Ukusuka kwimbono yesikali esipheleleyo seshishini lemithwalo, intengiso yelizwe yam imkhulu kwaye ibikwelixesha lokunyusa okuqhubekayo kule minyaka idlulileyo. Ngokwezibalo ze-Euromonitor, ukusukela ngo-2012 ukuya ku-2019, ubungakanani bemakethi yelizwe lemizi-mveliso yam inyuke ukusuka kwi-130.2 yezigidigidi ze-yuan ukuya kwi-253 yezigidigidi ze-yuan, ngomndilili wokukhula komyinge we-9.96%, ophambi kwenqanaba lokukhula kwehlabathi.
Umthamo wemveliso yamashishini ujolise kakhulu, kwaye izihloko zeshishini ziyabonakala
Ngokwesahlulo sommandla, ishishini lempahla lase China liphuhlise kakhulu kumaphondo aselunxwemeni eGuangdong, eFujian, eZhejiang, eShandong, eShanghai, eJiangsu, nakwilizwe laseHebei naseHunan. Njengomvelisi wemithwalo omkhulu emhlabeni, iimveliso zempahla yase China eziveliswe ngala maphondo asibhozo zenza ngaphezulu kwe-80% yesabelo sentengiso selizwe. Ngokwahlukileyo, ukukhula kwemizi-mveliso yemithwalo kwimimandla emikhulu esembindini nasentshona kusemva kakhulu.
Ukusuka kwimbono yeendawo zemveliso, amandla emveliso yasekhaya ikakhulu egxile kwiimveliso ezintathu ezinkulu zemithwalo eqokelela indawo yeShiling eGuangdong Huadu, ePinghu eZhejiang, naseBaigou eHebei; kwangaxeshanye iimarike zobungcali ezinje ngeHaining City City, iShanghai Hongkou Centre yeZikhumba, kunye neGuangzhou City Leather zazalwa. . Ezi ndawo zihlanganisela iakhawunti malunga ne-70% yexabiso lemveliso yelizwe lam.
Ezi nkcukacha zingentla zivela "kwimveliso yeChina Bag yokuvelisa imveliso kunye nemfuno yokuThengisa kunye neNgxelo yoHlahlelo loTyalo-mali" yiQianzhan Industry Institute. Kwangelo xesha, iZiko loPhando lweShishini laseQianzhan libonelela ngezisombululo zedatha enkulu yemizi-mveliso, ucwangciso lwemizi-mveliso, ukubhengezwa kwemizi-mveliso, ucwangciso lwepaki yemizi-mveliso, kunye nokukhuthaza utyalomali kwimizi-mveliso.